युरोप यात्रा « News of Nepal
पुष्करलाल श्रेष्ठ सन् १९९० मा जर्मनी सरकारको निम्तोमा पूरै जर्मनी घुमिसकेको हुँदा यसपटकको युरोप यात्रामा जर्मनीको मुख्य शहर म्युनिख मात्र घुम्ने योजना बनाएका थियौं। यसपटकको जर्मनी यात्रा भने त्यति सुखद
पुष्करलाल श्रेष्ठ । इटलीको राजधानी रोम शहरबारे एउटा कथन छ, ‘रोम शहर एकदिनमा बनेको होइन।’ यो फ्रेन्च कहावत कहिले र कुन बेलादेखि भन्न थालिएको स्पष्ट नभए पनि साँच्चिकै रोम शहर बन्नचाहिँ
पुष्करलाल श्रेष्ठ स्पेनको सबैभन्दा सुन्दर शहर बार्सिलोना घुमेर फर्केको केही दिनपछि अर्थात् २०७४ भदौ १ गते हामी घुमेकै एउटा ठाउँ ला राम्बलामा गाडीबाट आक्रमण गरी १३ जना पर्यटक मारिएको समाचार
वाह ! प्राग !!
पुष्करलाल श्रेष्ठ चेक गणतन्त्र भ्रमण गर्नुअघि अस्ट्रिया, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, इटली, डेनमार्क, स्विडेन, नर्वेजस्ता युरोपका थुप्रै विकसित मुलुक घुमिसकेको थिएँ। यी देशका विकासबारे कुरा गर्दा चेक गणतन्त्र घुमिसकेका विदेशी
पुष्करलाल श्रेष्ठ । २०७४ वैशाख १३ गते बुधबारका दिन। अष्ट्रियाको राजधानी भियनास्थित राजकुमार आयोगन योसर्फको दरबार घुम्दै थिएँ, अचानक पेट दुख्न थाल्यो। ठीक होला कि भन्दै दुई बोतल पानी पिएँ। सहनै
पुष्करलाल श्रेष्ठ ‘क रिब ४० वर्षअघिको कुरा होला, पहिलोपल्ट स्विजरल्यान्ड आउँदा म गल्तीले ट्रेनको पहिलो श्रेणीको डिब्बामा चढ्न पुगेछु। कन्ट्रोलमा आउने ट्रेनका कर्मचारीले मेरो टिकट जाँचेपछि ‘तपाईंको ठाउँ यो होइन,